अनसन तोडेको चार दिनपछि शितलहर प्रभावितको उपचार गर्न रौतहट पुगे डा. केसी | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अनसन तोडेको चार दिनपछि शितलहर प्रभावितको उपचार गर्न रौतहट पुगे डा. केसी
अनसन तोडेको चार दिनपछि शितलहर प्रभावितको उपचार गर्न रौतहट पुगे डा. केसी
माघ ३ गते, २०७४ - १८:०९
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसीले शितलहर प्रभावित मुसहरको उपचार गर्न भन्दै रौतहट गएका छन् ।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा शितलहर प्रभावित मुसहरलाई डाक्टर केसीले शिविर चलाएर बिहीबारदेखि उपचार सुरु गर्ने भएका हुन् । केसीसहित उनको टिम बुधबार काठमाडौंबाट केही थान कम्बल र न्याना लुगा बोकेर रौतहट हिँडेको उनका एक सहयोगीले बताए । एक महिनादेखि तराईमा चल्न थालेको शितलहरबाट प्रभावितकालागि शिविर चलाउन जाने योजना उनले बनाएका थिए।
शशी शर्मालाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको डिनमा पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि उनी पुस २४ गते चौधौं पटक अनसन बसेका थिए।
माघ ३ गते, २०७४ - १८:०९ मा प्रकाशित